Otú nyefee Photos si iPod aka ka Computer
> Resource> iPod> Nyefee Photos si iPod aka ka PC Mfe
Gịnị mere ị chọrọ nyefee foto site na iPod aka ka PC?
Mgbe-ekwu okwu banyere ihe ndị mere nyefee foto na albums si gị iPod aka ka PC, ị nwere ike a ogologo ndepụta. N'ebe a, anyị na-ụfọdụ dị ka ihe atụ:
Foto na albums na kọmputa na-arahụ mgbe gị na kọmputa jiri ma ọ bụ mgbe ị na-ihichapụ ha na mberede.
Emeela ọtụtụ foto na echekwara na Igwefoto mpịakọta, ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara ha ka ha PC na-eso ezinụlọ na ndị enyi.
Na ọtụtụ foto gị iPod aka, ị na-ekpebi mbupụ ha na-eme ka ụlọ maka ndị ọzọ faịlụ.
Otú nyefee foto site na iPod aka ka kọmputa?
Dị ka otu ụzọ na-omume, iTunes naanị-enyere gị aka mmekọrịta faịlụ gị iDevice, ọ bụghị otú azụ. N'ihi ya, na-idetuo foto azụ kọmputa, ị chọrọ enyemaka ụfọdụ. Ị nwere ike iji Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). A na usoro a haziri n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ị nyefee ma jikwaa photos, music, videos, kọntaktị, iTunes U, Pọdkastị, na ndị ọzọ n'etiti gị iPod aka, iPhone, iPad na PC / iTunes. Download a omume na-eso nkuzi n'okpuru ịmụta otú nyefee foto ndị si iPod aka ka kọmputa.
Step1: Jikọọ iPod emetụ na kọmputa site na iji eriri USB na
Na-amalite, wụnye na ẹkedori a usoro na kọmputa gị. Jiri eriri USB jikọọ gị iPod aka na kọmputa. Mgbe a usoro-achọpụta rụọ gị iPod aka, i nwere ike ihuchalu ozi niile ke akpan window.
Cheta na: Ọ dị ezigbo mkpa na ọ dị mkpa iji wụnye iTunes na PC gị na n'ihu na-eji TunesGo.
Step2: Detuo foto site na iPod aka ka kọmputa
Mgbe ahụ, pịa bọtịnụ "Photos" na-ekpe na-n'akụkụ panel iji bugote photos management window. Họrọ foto ma ọ bụ albums, gụnyere igwefoto mpịakọta, wee pịa "Export ka". Mgbe ahụ, a obere faịlụ nchọgharị window Pop elu.
Họrọ otu ọnọdụ ịzọpụta exported foto na albums. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ka usoro ihe omume na-amalite ịkwaga iPod aka photos na ọba gị na kọmputa. Cheta na-gị iPod aka ejikọrọ na kọmputa tupu ebufe nsọtụ.
Cheta na: TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3 dabeere iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9. Ma TunesGo (Mac) bụ dakọtara na iPod aka 5 na iPod aka 4 na-agba ọsọ iOS 5/6/7/8/9.
E wezụga na-akpụ akpụ foto site na iPod aka ka kọmputa, ị nwere ike exporting foto na albums site na kọmputa gị iPod aka dị ka mma. Download a usoro, na ị ga-ahụ ihe salient atụmatụ banyere ya.
Soro Video nyefee Photos si iPod aka ka Computer